10 oo ka mid ah Apps Best for Lacag Money - Rule News
10 oo ka mid ah Apps Best for Lacag Money
From dhimis on qol hotel iyo tigidhada diyaaradda si ay u vouchers shopping, heshiisyo ardayga iyo tikidhada fanaanka aan lacagta jaale
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “10 oo ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee lacagta lagu badbaadinayo” waxaa qoray Stuart ku milmaya, waayo theguardian.com on Friday 5-tii February 2016 09.00 UTC
All baraf da'da gunti. Xitaa haddii in uusan kordhin u qalab qaali ah aan ku qaadi meelo our. Laakiin casriga ah waxaad badbaadin kartaa lacag, haddii aad iyaga ha.
Apps barbar sicirka cuntada, tigidhada diyaarada, caymiska iyo in ka badan si fiican u aasaasay oo ku saabsan dukaamada app hadda, sida ay yihiin apps la habab dheeraad ah oo gaar ah oo aad nafaha a pounds yar.
Halkan waxaa ku qoran 10 apps ka caawiya tahay inuu ka tago jeebka dareen yar buurbuurnaayeen ah dhamaadka bisha.
Tiro sii kordhaysa ee dadka musaafiriinta soo noqnoqda ayaa ku tago ka dib iyo ka dib inay jartaan hotels ay - dhab ahaantii, in maalintii ay yimaadaan magaalo. Hotel Caawa waa mid ka mid ah Chine ee dalka Baxreyn dhaqanka this: dhimis kala xaajoon jaale qolka daqiiqadii ugu danbeysay-. Haddii aad u dhiirran ku filan tahay, aad bacda kartaan heshiis wanaagsan qaar ka mid ah.
app British Dice waa hab lagu dhirtuba riwaayada music socda iyo iibsadaan tikidhada, taas oo ay ku kaydsan yihiin oo gebi on your smartphone. Waxa aanu dabooli fanaanka kasta, laakiin halkii ay doorashada la doortay ay kooxda tifaftirka, oo ay ku jiraan ciidan ee guutooyinkiisa oo ilaa-iyo-soo socda. Qaybta lacagta lagu badbaadinayo The: aad bixiso lacagta ma jaale at dhan.
Skyscanner waa app ugu adkeeyey barbar dhigo qiimaha diyaarad: hab degdeg ah si ay u taabo in aad la doonaysaan, oo eega kii ayaa tikidhada jaban. app ayaa markaas idiin Dardaarmi goobta ku habboon inay jartaan duulimaad aad, qeybinayay fudud, filtarrada wax ku ool ah si ay u karkariyo hoos ugu fursadaha ugu badan ee khuseeya.
App Tani waa mid ka mid ah foodies, daboolaya ka badan 7,000 maqaayado agagaarka UK oo ay ku jiraan silsilado sida Pizza Express iyo Zizzi. Waxay kuu hayaa ilaa taariikhda la dhimis iyo dalacsiinta, iyo sidoo kale ka caawiyay aad aragto oo makhaayadaha ugu dhow meesha aad hada degan, iyo ballansan miis ka app ah.
NUS dheeraad ah
NUS dheeraad ah.
ardayda Kaliya ee UK u baahan bixi app this, taas oo laysku ka dhimis kala duwan xaajooday by urur arday NUS ah. Waxa kale oo uu leeyahay muuqaalada goobta ku salaysan, la map muujinaya dalabyo u dhow. feature Its search sidoo kale waa ku anfacaya, caawinta aad jidka u hesho iyada oo in ka badan 150 dhimis Shurakadiinna.
mySupermarket waa sida ugu badan shopping-liiska app a sidii hab si aad u hesho qiimo dhimis: waxaad u isticmaali kartaa in aad ku darto waxyaabaha aad u baahan tahay si ay u iibsadaan toddobaadka oo dhan, ka dibna u sax sida aad dhex hayirin socdo. Laakiin app ayaa sidoo kale ku hayaa isha ku qiimaha ee dukaamada kala duwan ee UK, caawinaya in aad is barbar dhig qiimaha iyo arko heshiis cusub sida ay u tagaan live.
Ha apps rubuciis-amaanay sida Uber uu idiin badbaadiyo lacag? Mararka qaarkood, inkastoo aan markii socotay faragelintii "Soo-kaca" binta yahay in saamayn. Minicabit qaadataa hab oo kala duwan: waa app la barbardhigo waayo, taxi iyo mini-cab shirkadaha guud ahaan UK ah, aad qaadan in ay ka jaftaa in faahfaahinta safarka, markaas dhirtuba xigasho oo ka shirkadaha maxaliga ah ee kala duwan. Waxaa hadda ka shaqeeya 40 magaalooyinka UK.
Too mashquul si ay u sii guranayaan faahfaahsan oo ku saabsan biilasha korontada iyo gaaska aad? Ku biir kooxda. Meter akhrinta waa qalab aad u faa'iido badan ee si sax ah in, la fara badan garaafyada quruxsan raad aad isticmaalka iyo kharashka. Laakiin waa sifooyinka la barbardhigo qiimaha in aad badbaadin kartaa lacag: hubinta kharashka bixiyayaasha kale ee meesha aad degan tahay iyada oo aan iibiyaha ah hortiisa.
Kombiyuutaro halkii casriga ah waxaa laga yaabaa in habka ugu doorteen in ay baaritaan qiimaha caymiska baabuurta. MoneySuperMarket ee app MoreMoney ayaa rajeynaya inuu u jirrabaysaan ah dad badan oo yar si ay u tagaan mobile in kastoo: waa deg deg ah, hab fudud oo si aad u hesho qiyaasta baabuurka iyo caymiska guriga, ka mid ah adeegyada kale ee dhaqaale.
Swing bisad on dukaamada app, oo aad ku dhuftey doonaa a apps foojarka darsin lacagta lagu badbaadinayo: Wowcher, HotUKDeals, Vouchercloud iyo kuwa kale oo dhan qiimo eegno ugaadhsadayaal gorgortan. VoucherCodes waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran, darsameen of shopping, isagoo wax cunaya oo safarka dhimis, iyo sidoo kale muuqaalada goobjooga heshiisyo maxali ah.
Maxaa inoo seegay? qaybta comments wuxuu u furan yahay in aad la wadaagto waayo-aragnimada aad ee apps kor ku xusan, iyo talooyin apps lacagta lagu badbaadinayo, Ma aynu ka mid ah.
← Fentanyl: Drug 50 Times More karaa Badan Heroin Apple oo sheegtay in iPhone 'Error 53′ waa in Ilaali Macaamiisha’ Ammaanka →